नायिका पायल घोषले लगाइन् अनुराग कश्यपमाथि यौन उत्पीडनको आरोप - हिपमत
अभिनेत्री पायल घोषले फिल्म निर्माता अनुराग कश्यपमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी छिन्् । पायल घोषले अनुराग कश्यपलाई ट्वीटरमा ट्याग गर्दै लेखेकी छिन्, ‘अनुराग कश्यपले ममाथि जबरजस्ती गरे । नरेन्द्र मोदी जी उनीविरुद्ध कारवाही गर्न र यी सृजनात्मक पुरुष पछाडिको राक्षसी अनुहारलाई देशभरी उदाङ्गो पारिदिन आग्रह गर्दछु । मैले यस्तो कुरा गर्दा, यसले मलाई नै क्षती पुर्याउँछ र थाहा छ कि मेरो सुरक्षामा खतरा छ । कृपयाा मद्दत गर्नुहोस् ।’
रेखा शर्माको यो स्वतः सज्ञानमा पायल घोषले उनको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै लेखिन्, ‘धन्यवाद, म त्यस्तै गर्नेछु ।’
पूरा घटनामा अनुराग कश्यपको प्रतिक्रियाको प्रतिक्षा थियो ।
अनुराग कश्यपले पनि अबेर राती करिब १ बजेतिर हिन्दी भाषामा चारवटा ट्वीट गरे । अनुरागले आफ्नो ट्वीटमा लेखे, ‘मलाई चुप गराउनका लागि यत्तिका समय लाग्यो ? खैर, केही छैन । मलाई चुप गराउँदा गराउँदै यति झुटो बोल्यौ कि महिला भएको नाताले अन्य महिलालाई पनि तान्यौ ? थोरै त मर्यादा राख्नुहोस् म्याडम । यति मात्रै भन्छु कि जतिपनि आरोप छ, त्यो सबै आधारहीन हो ।’
‘बाँकी जे होला हेर्दै जाऔं । तपाईंको भिडियोमा नै देखिन्छ कि कति साँचो हो कति होइन । तपाईंका लागि प्रार्थना र प्रेम । तपाईंको अंग्रेजीको जवाफ हिन्दीमा दिएका कारण माफी चाहन्छु ।’
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युपछि बलिउडमा आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै छ । गुटबन्दी र नेपोटिजमको कुरा पनि उठाइएका छन् ।